အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 အခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 - Scan ကို & Virus ကို Remove, Cleaner
အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 - Scan ကို & Virus ကို Remove, Cleaner APK ကို
အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 - ဗိုင်းရပ်စ် Scan ကို & ဖယ်ရှားရေး, Cleaner ဗိုင်းရပ်စ် Cleaner, ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, Junk Cleaner, မြန်နှုန်း Booster, AppLocker & ဘက်ထရီချွေတာတွေနဲ့ထုပ်ပိုး, တစ်ဦးဘက်စုံသုံးဖုန်းကိုလုံခြုံရေးနှင့် antivirus ကို App ဖြစ်ပါတယ်။ အစွမ်းထက်လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများပေးခွငျးအားဖွငျ့, ကသင့်ဖုန်းနှင့် privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
antivirus ကို, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်, ဗိုင်းရပ်စ်စကင်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး, ဖုန်းသန့်စင် & junk သန့်စင်, app ကို Locker, ဘက်ထရီချွေတာ: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုပါကအပါအဝင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် antivirus ကိုနှင့်လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ဘေးကင်းနှင့်အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 ၏ faster.Key features တွေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အားလုံးလိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များ - ဗိုင်းရပ်စ် Scan ကို & ဖယ်ရှားရေး, Cleaner:
-antivirus သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလုံခြုံမှဗိုင်းရပ်စ်စကင် & ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး။ အန်းဒရွိုက် & ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်ကြောင်း antivirus ဆော့ဖ်ဝဲအကောင်းဆုံး antivirus ကို။
-ဖုန်းနံပါတ် Cleaner & Booster junk သန့်စင်ခြင်းနှင့်သိုးထီးအာနိသင်တိုးမြှင့်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, စင်ကြယ် Junk ဖိုင်များကို & cache ကို။ android ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဖုန်းကိုသန့်စင်။
-App ကို Locker သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ password များနှင့်အတူ app များကိုသော့ခတ်။
-CPU ကို Cooler စကင်ဖတ်ခြင်းနှင့် CPU ကိုအပူချိန်ကိုချအအေး apps များအပူလွန်ကဲကို turn off ။
-ဘက်ထရီ Saver ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့ effectively.- ပိုမိုအသုံးဝင်အသေးစိတ်ကိုလေ့လာပါ: -
ရီးရဲလ်အချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ, လုံခြုံရေး app တစ်ခု
အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 - ဗိုင်းရပ်စ် Scan ကို & ဖယ်ရှားရေး, Cleaner 24 /7လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ၎င်း၏ antivirus ကိုအင်္ဂါရပ်အသိဥာဏ်ဖတ်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပေး, ဘေးကင်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း။ android ဖုန်းနှင့်သင်အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်မှု & ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်ကမ်းလှမ်းအကောင်းဆုံး antivirus ကို။ Antivirus ကို၏အင်္ဂါရပ်ကအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး antivirus ကိုဖြစ်လာစေသည်ထားတဲ့အင်အားကြီးဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်မှု & ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်, ပေးထားပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် antivirus ကိုအင်ဂျင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန် junk သန့်စင် & cache ကိုသန့်စင် - အကောင်းဆုံးဖုန်းကိုသန့်စင်
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ် antivirus ကိုနှင့်လုံခြုံရေး app တစ်ခုအဖြစ်က Antivirus ကိုလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုဒါပေမယ့်လည်းဖုန်း Cleaner ၏လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများသာရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံး antivirus ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်။ တဦးတည်း-ကိုထိပုတ်ပါအတွက် Junk ဖိုင်များကိုဖွင့်ရှင်းလင်းရန် antivirus ကို, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, junk သန့်စင်, ဖုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ပေး။ ဆန့်ကျင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူညီပေးသည်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်စကင်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးထောက်ပံ့ပေးသောအကောင်းဆုံး antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ။ အကောင်းဆုံးဖုန်းကိုသန့်စင်, အန်းဒရွိုက်ထိထိရောက်ရောက်ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ဘို့ antivirus ကို!
, antivirus ကိုအားဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ဖုန်းကို performance ကိုမြှင့်တင်ရန်။ antivirus ကို, ဖုန်း booster ကတော့မြန်နှုန်း booster ကတော့ဂိမ်း booster ကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်အပါအဝင်ဖုန်းကိုအာနိသင်တိုးမြှင့်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု။ ဒါ့အပြင် Antivirus ကိုဗိုင်းရပ်စ်စကင်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ antivirus ကို (အကောင်းဆုံး antivirus ကို) နှင့်သန့်စင် app ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
သတိပေးချက် Cleaner & စည်းရုံးရေးမှူး
သတိပေးချက်သန့်စင်မလိုချင်တဲ့အကြောင်းကြားစာထံမှသင်တို့အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးအခမဲ့ antivirus ကို app ကို & ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူသန့်စင် App ဖြစ်ပါတယ်။ Cleaner သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေးသတိပေးချက်၏လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှု။ တစ် antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ (အကောင်းဆုံး antivirus ကို), ဖုန်းကိုသန့်စင်နှင့်လုံခြုံရေး app တစ်ခုအဖြစ်ကအကောင်းဆုံးအခမဲ့ antivirus ကို, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဖုန်းသန့်စင်ခြင်းနှင့်တကွသင်ပေးပါသည်။
App ကို Locker သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည် - သင့်ရဲ့ privacy ကိုယ်ရံတော်
သငျသညျကိုသတ်မှတ်ထားသောစကားဝှက်များဖြင့်သင့် apps များသော့ခတ်ထားတဲ့ antivirus ကိုနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်ကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး privacy ကိုကာကွယ်ခြင်း။ သင့်ရဲ့ privacy ကိုကိုယ်ရံတော်အဖြစ်အကောင်းဆုံး antivirus ကိုနှင့်လုံခြုံရေး app တစ်ခု။
အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 - ဗိုင်းရပ်စ် Scan ကို & ဖယ်ရှားရေး, Cleaner, antivirus ကိုနှင့်ဖုန်းသန့်စင်ရာမှတိုက်ခန်း၎င်း၏ CPU ကို Cooler လည်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလုံခြုံ။
ဘက်ထရီသက်တမ်း & ဖုန်းကိုဘက်ထရီကာကွယ်မှုတိုးချဲ့
ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့ဘက်ထရီဖျန်ကြောင်း app များကိုပိတ်ပစ်။ antivirus ကို (ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်, ဗိုင်းရပ်စ်စကင် & ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး) နှင့်ဖုန်းကိုသန့်စင် (junk သန့်စင်) ကဲ့သို့ပင်ဘက်ထရီချွေတာဒီလုံခြုံရေး app ကိုသင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။
အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 - ဗိုင်းရပ်စ် Scan ကို & ဖယ်ရှားရေး, Cleaner : Android အတွက်အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးနှင့် antivirus ကို app ကိုအကောင်းဆုံး antivirus ကို & လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများပေး!
အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 - Scan ကို & Virus ကို Remove, Cleaner
8.80 ကို MB
က Hyper မြန်နှုန်း